Shina Fitaovana fampitaovana mekanika China, mpamatsy fitaovana fampitaovana mekanika
Mill Mill Flour Mill
Tetikasa fampifangaroana koba
Fitaovana fanadiovana varimbazaha
Fitaovana fanadiovana voa
Fitaovana fampitana mekanika
Fitaovana fampitaovana sy fitadiavana pneumatika
Separator Rotary Series an'ny TCRS
Ny ascenseur TDTG serivisy premium antsika dia iray amin'ireo vahaolana ara-toekarena indrindra amin'ny fikirakirana vokatra granular na pulverulent. Ny siny dia miorina amin'ny fehikibo mitsangana mba hamindra fitaovana. Ireo fitaovana dia ampidirina ao anaty masinina avy any ambany ary avoaka avy any ambony.
Ny mpampita ny rojo dia miaraka amina vavahady mihoampampana ary switch switch. Ny vavahady mihoa-pefy dia apetaka amin'ny casing mba hisorohana ny fahasimban'ny fitaovana. Eo amin'ny lohan'ilay masinina no misy ny takelaka fanampiana.
Mpampita ny rojo boribory
Ny mpampita fantsom-panafody premium antsika dia mety amin'ny fampitana vovoka, granular, lumpish, koba tsara toto sy marokoroko toy ny arina, lavenona, simenitra, voamaina, sns. Ny mari-pana mety amin'ny fitaovana dia tokony ho latsaky ny 180 ℃
Mpanaparitaka visy amin'ny tubular
Milina fitotoam-bary vita amin'ny tavoahangy TLSS andiana fantsom-bokatra dia ampiasaina amin'ny famahanana be dia be amin'ny famotoana lafarinina sy fikosoham-bary.
Amin'ny maha milina fanodinana varimbazaha eran'izao tontolo izao, ity milina mpampita ity dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanodinana varimbazaha, toby famokarana herinaratra, seranan-tsambo ary fotoan-dehibe hafa handefasana granule, vovoka, akora matevina na kitapo, toy ny voam-bary, arintany, fitrandrahana, sns.
Mpanatitra fehikibo vaovao
Ny mpampita fehikibo dia mihatra betsaka amin'ny voamaina, arina, fitrandrahana, ozinina herinaratra, seranana ary saha hafa.
Varavarana miendrika boky sy pneumatika
Ny bokin'ny milina fanaovana koba toto sy vavahady slide pneumatic dia be mpampiasa amin'ny varimbazaha sy ny menaka, ny zavamaniry fanodinana sakafo, ny simenitra ary ny zavamaniry simika.
Famoahana fitaovana ambany
Adiresy: Distrikan'ny Indostria Poliu Quliang Xinmi City
Telefaona: +86 13633846327
Fitaovana fikosoham-bary vita amin'ny lafarinina ao anaty koba ...
Milina famolavolana koba vita amin'ny lafarinina / mpamboatra ho an'ny varika ...
FSFG andiany planifter ampiharina be amin'ny zava-maniry maoderina lafarinina zavamaniry sy ri ...
Fomba fanesorana vato ao anaty vilia
Ao amin'ny fikosoham-bary, ny dingan'ny fanesorana ireo vato amin'ny varimbazaha dia ...
Ny indostrian'ny sakafo dia indostrian'ny andrin'ny toekarem-pirenenan'i Sina, a ...